Fiangonana: Iantefan'ny fiheveran'Andriamanitra ambony indrindra
"Mba horaisiny ho an'ny tenany izany ho fiangonana malaza tsy misy pentimpentina, na fiketronana, na izay toy izany, fa mba ho masina sady tsy misy tsiny izy" - Efes. 5:27.
Eto an-tany dia ny fiangonana, na malemy sy tsy tanteraka aza, no hany toerana ampifantohan'i Kristy ny fiheverany ambony indrindra. Miambina sy miahy azy mandrakariva Izy, ary mampahatanjaka azy amin'ny alalan'ny Fanahiny Masina. Amin'ny maha-mambran'ny fiangonany antsika, moa ve isika hamela Azy hamolavola ny saintsika sy hiasa amin'ny alalantsika ho voninahitry ny Anarany? — Ms, 155, 1902
Tian'i Kristy ny fiangonany. Ny fanampiana rehetra ilaina dia hatolony ireo izay mangataka tanjaka Aminy mba hananany toetra tahaka ny Azy. Kanefa tsy fahalemena ny fitiavany. Tsy hiara-miasa amin'ny fahotana Izy, ary tsy hanome fahombiazana raha mbola manohy mizotra amin'ny lalan-dratsiny izy ireo Amin'ny alalan'ny fibebahana marina irery ihany no handraisan'izy ireo famelan-keloka; satria tsy hosaronan'Andriamanitra amin'ny akanjom-pahamarinany ny faharatsiana. Hankasitrahany ny asa atao amim-pahatokiana. Handrotsaka fitahiana be Izy ho an'ireo olona izay maneho amin'ny mpiara-belona aminy ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny famindrampony ary ny fitiavany. Aoka izay manatanteraka asa fanompoana ho Azy handeha eo anatrehany amin'ny fanetren-tena, hanaraka amim-pahatokiana ny diany, ary hankamamy ireo foto-kevitra masina maharitra mandrakizay. Aoka hasehon'izy ireo amin'ny fiteniny sy ny asany fa ankatoaviny koa ireo lalàna izay ankatoaviny any an-danitra. — Ms, 52,1901
Ny fiangonana no nanankinana ny haren'ny fahasoavan'i Kristy; ary amin'ny alalan'ny fiangonana no hanehoana miharihary amin'ny farany, eny, fa na dia amin'ny "fanapahana sy amin'ny fanjakana eny amin'ny rivotra" aza, ny fara tampon'ny halehiben'ny fitiavan' Andriamanitra (...) Ny fiangonana no tanàna mimandan'Andriamanitra, tanàna fialofana izay arovany eto amin'ity izao tontolo izao mpikomy ity (...) Ao no sehatra anehoany ny fahasoavany, ary mahafaly Azy ny maneho ao ny heriny izay manova ny fon'ny olona.
Tsy mety ritra ny fitiavan'Andriamanitra ny fiangonany. Tsy mitsahatra ny fikarakarany ny lovany. —AA, 9-12